မင်္ဂလာပါ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကိုရဲနောင် ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ လောလောဆယ် ကျနော်တို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အသင်းသားများ မိမိတို့ နာမည်လေးတွေကို မြန်မာ နာမည်လေးတွေ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဖိုရမ်အနေနဲ့ login လုပ်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာဖောင့် မထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါဘူး။ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဒီလို မိမိနာမည်ကို မြန်မာလိုလေး ရေးချင်ရင် မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ စက်ပေါ်မှာ Alpha Zawgyi Unicode ရှိရပါမယ်။ ဒါမှသာ မိမိနာမည်ကို မြန်မာလိုရိုက်ပြီး login ၀င်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်လေးကို သတိပြုပြီးမှသာ မိမိတို့အမည်များကို မြန်မာလိုပြောင်းစေချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဖိုရမ်ကို ၀င်မရပဲ ပြဿနာတစ်စုံတရာ ရှိခဲ့ရင် www.myanmarfamily.org မှာရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရန် ဆိုတာကို သွားပြီး မေးလ်ပို့လိုက်ရင် ကိုရဲနောင်ဆီရောက်ပါလိမ့်မယ်။ သူဖြေရှင်းပေးမှာပါ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုရဲနောင်က မြန်မာနာမည်လေးနဲ့ မြင်ချင်တာကြာပြီဆိုလို့ ကျနော်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်နော်။ အမြန်နေကောင်းပါစေ။
Last edited by Aung Aung; 16-11-2008 at 08:03 PM.. Reason: change from .net to .org
ကျွန်တော်လည်းနာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာ .. ရမလာလို့ပေါ့ ..
ကိုရဲနောင်ကြီး မြန်မြန်ကျန်းမာပါစေဗျာ .. နေမကောင်းတာကို
ကိုဂျစ်လဲ ဂရုစိုက်ပေးလိုက်ဦးဗျ ..တစ်ပတ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီ နော်
မိဝေး ဖဝေးနဲ့နေရတာ .. ဂရုစိုက်ဗျာ .. သင်္ကြန်မှာ မပျော်ရပဲနေနေပါဦးမယ်နော် ..
၁၃၆၉ ရဲ့ နှစ်သစ်နဲ့အတူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ ..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Tha Toe Naung®
တည်နေရာ: London, England, The United Kingdom
ပို့စ် 95 ခုအတွက် 398 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by ဂျစ်တူး
ကိုရဲနောင် ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ လောလောဆယ် ကျနော်တို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အသင်းသားများ မိမိတို့ နာမည်လေးတွေကို မြန်မာ နာမည်လေးတွေ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဖိုရမ်အနေနဲ့ login လုပ်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာဖောင့် မထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါဘူး။ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဒီလို မိမိနာမည်ကို မြန်မာလိုလေး ရေးချင်ရင် မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ စက်ပေါ်မှာ Alpha Zawgyi Unicode ရှိရပါမယ်။ ဒါမှသာ မိမိနာမည်ကို မြန်မာလိုရိုက်ပြီး login ၀င်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်လေးကို သတိပြုပြီးမှသာ မိမိတို့အမည်များကို မြန်မာလိုပြောင်းစေချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဖိုရမ်ကို ၀င်မရပဲ ပြဿနာတစ်စုံတရာ ရှိခဲ့ရင် www.myanmarfamily.net မှာရှိတဲ့ ? ဆက်သွယ်ရန် ? ဆိုတာကို သွားပြီး မေးလ်ပို့လိုက်ရင် ကိုရဲနောင်ဆီရောက်ပါလိမ့်မယ်။ သူဖြေရှင်းပေးမှာပါ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုရဲနောင်က မြန်မာနာမည်လေးနဲ့ မြင်ချင်တာကြာပြီဆိုလို့ ကျနော်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်နော်။ အမြန်နေကောင်းပါစေ။
ကိုဂျစ်တူးကြီးရေ ... ကိုရဲနောင်နဲ့ဟိုနေ့က စကားပြောဖြစ်လို့ ... သူနေမကောင်းတာဘယ်လိုများနေလည်းလို့ webcam ကနေ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တာ တော်တော်လေးကို ပိန်ချုံးနေရှာတယ်။ တော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်။ ပြန်ကောင်းလာပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပဲ။ ဖိုရမ်က နေရာတော်တော်များများမှာ မြန်မာလိုရိုက်လို့ရတော့ ကျွန်တော် ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ အချို့ဆိုဒ်တွေမှာတောင်မှ နာမည်နှင့် ခေါင်းစဉ်တွေကို မြန်မာလိုရေးလို့မရသေးဘူးနော်။ အခက်အခဲတွေကြားက ကြိုးစားထားပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်ဗျာ။ နောက်ဆိုရင် အခက်အခဲတွေအကုန် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ဖိုရမ်တိုးတက်စည်ပင်ဖို့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Tha Toe Naung® အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Tha Toe Naung® ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Visit Tha Toe Naung®'s homepage!
Find More Posts by Tha Toe Naung®